रोचक खान छा’डेर होइन खाने तरिका मिलाएर हुन्छ तौ’ल नि’यन्त्रण
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: जब राम्ररी च’पाएर खानेकुरा सेवन गरिन्छ, अर्थात ठो’स खानेकुरालाई मु’खमै त’रल बनाएर निल्छौं, तब मो’टोपन बढ्ने संभावना कम हुन्छ ।
तपाईं गु’लियो खानेकुराको सौ’खिन हुनुहुन्छ भने पनि मो’टोपन नि’यन्त्रणमा सम’स्या हुन्छ । मो’टोपन घ’टाउन धेरैले खानामा क’टौती गर्छन् । भो’कै बस्छन् ।
तर, यसले मो’टोपन घ’टाउने होइन, बरु बढाउँछ । अर्को कुरा, खानेकुरा घ’टाउने च’क्करमा हामी खानाको मात्रा भन्दा पनि छा’कमा क’टौती गर्छौं । तीन वा चार छा’कको रुटिन घ’टाएर दुई वा एक छा’क खान्छौं । खाएको बेला पे’ट चर्कनेगरी खान्छौं ।
अब एकसाथ भारी खाना प’चाउन पा’चन य’न्त्र स’क्षम हुँदैन । अति’रिक्त खा’ना बो’सोमा परि’णत हुन्छ । मो’टोपन बढ्छ । मो’टोपन घ’टाउने का’इदा छा’कमा क’टौती गरेर होइन । खानपानमा क’टौती गर्ने होइन । पो’षक तत्व आपूर्तिका लागि दिनभरमा हामीलाई पटक-पटक खानेकुराको आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैले खानेकुरा खाइरहनुपर्छ । तर, खानेकुराको नाममा जं’कफूड, फा’स्टफूड वा प्र’शोधित र बजारमा उपलब्ध तयारी खानेकुरा सेवन गरिन्छ भने, त्यसले पक्कै मो’टोपन बढाउँछ । किनभने ति खानेकुरामा पो’षक त’त्व त हुँदैनन् नै, त्यसले पे’टमा अतिरिक्त बो;झ थपिदिन्छ । तपाईंले यी खानेकुराका लागि चाहि मु’खमा ता’ल्चा लगाउनैपर्छ । म’दिरा र मा’सुजन्य परिकारले मो’टोपन बढाउँछ । यो कुरा पनि ख्याल राख्नुपर्छ ।
फलफूल, पानी र सा’त्विक एवं सु’पाच्य खानाले मो’टोपन पटक्कै बढाउँदैन । तौ’ल निय’न्त्रणका लागि प्रो’टिनको अहंम भूमिका हुन्छ । प्रो’टिन सेवन नगर्दा मे’टाबोलिज्म बढ्छ ।
त्यतीमात्र होइन, प्रो’टिनको सेवन गर्दा श’रीरमा भोक जगाउने ह’र्मोन ग्ले’रिनको स्राव कम हुन्छ । त्यही कारण हामीलाई कम भो’क जाग्छ र अनावश्यक खानेकुरा खाइँदैन । कतिपय मानिसमा तौ’ल नि’यन्त्रण गर्नु यसकारण गा’ह्रो हुन्छ, उनीहरु जानेर वा नजानेर धेरै क्या’लोरी ग्र’हण गर्छन ।
त्यसैले कुनैपनि खानेकुरा सेवन गर्नुअघि त्यसले श’रीरमा क्या’लोरीको मात्रा बढाउँछ कि ? स’र्तक हुनुपर्छ ।मो’टोपन निय’न्त्रण नहुनुमा फाइ’बरयुक्त खानेकुरा सेवन नगर्नु पनि एउटा का’रण हुनसक्छ । तपाईंले भन्नुभयो, ‘म मज्जाले एक्स’रसाइज गर्छु ।’ तर, कसरी गर्नुहुन्छ ? कुरा त्यो हो ।
सही ढंगले व्यायाम नगर्दा पनि मो’टोपन नियन्त्रण हुँदैन । वा व्यायामको प्रभाव पर्दैन । तौ’ल निय’न्त्रणका लागि तपाईले आफ्नो वर्कआउट प्लानमा सबै किसिमको व्यायाम, जस्तो कि योग, का’र्डियो, वे’ट ट्रेनिक सम्मिलित गर्नुपर्छ । श’रीरको मे’टाबोलिज्म बढाउनका लागि वे’ट ट्रे’निङ एकदमै फा’इदाजनक हुन्छ ।
तपाईं कति घ’ण्टा सुत्नुहुन्छ ? यो प्रश्न तपाईंलाई अ’सान्दर्भिक लाग्न सक्छ । र, भन्नुहोला, ‘मो’टोपन घ’टाउने कुरामा निन्द्राको के नाता ?’ नाता छ नि, पर्याप्त मात्रामा नि’द्रा नलिदा पनि मो’टोपन बढ्ने संभावना रहन्छ ।
सात वा आठ घ’ण्टा म’स्त निदाउनुपर्छ । पर्याप्त पानी सेवन नगर्दा पनि मो’टोपन नि’यन्त्रण नहुन सक्छ । त्यस्तै कतिपय शा’रीरिक स’मस्या जस्तो कि, हाइ’पोथाइराइड, पलि’स्टिक आ’भेरियन सि’न्ड्रोम आदिको कारण तौ’ल बढ्छ । यसका साथै केही औ’षधीको सेवन मो’टोपन बढ्छ ।
तौ’ल नि’यन्त्रण गर्नु एक सु’स्त प्रक्रिया हो । तपाईं आजको भोलि नै त्यसको नतिजा खोजेर हार्डवर्क वा कडा श्रम गर्नुहुन्छ, खानामा क’टौती गर्नुहुन्छ भने तपाईं ग’लत हुनुहुन्छ । यो क्र’मिक रुपमा हुने लामो प्र’क्रिया हो ।
अब लगनका लागि चार महिना कुर्नुपर्ने मंसिरमा बिहे गर्न नभ्याउनेहरुले
बिहे गर्ने उमेर पुगेका युवा–युवतीका लागि चासोको महिना हो मंसिर । यस वर्षको मंसिरमा पनि थुप्रै जोडीहरु धमाधम लगनगाँठो कसिरहेका छन् ।मंसिरमा बिहे गर्न नभ्याउनेहरुले भने अब लगनका लागि चार महिना कुर्नुपर्ने भएको छ ।